အခြားအမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
ထင်မြင်ချက် | King Kong Trump သည်သူ၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုဆုံးရှုံးခြင်း - New York Times
"ဖင်လန်နိုင်ငံက Villages မှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာသူကသင့်ရဲ့ 401 (k) ကိုသင့်ရဲ့ XNUMX ()) ကိုဖြတ်သွားပါစေ၊ အဲဒါကပြွန်တွေကျသွားအောင်လုပ်ပေးတာပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျုံ့ - ထုပ်, ...
Barely three months to the 2020 CHAN in Cameroon, the Intermediate Lions of Cameroon, one of the sixteen teams in the competition has witnessed some pertinent changes in the technical bench. 62-year, Martin Ndtoungou Mpile is no new name…
Paul Biya သည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်
Dans une correspondance adressée ce 19 octobre 2020 au secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda, le secrétaire général de la présidence de la République (SGPR), Ferdinand Ngoh Ngoh, transmet au gouvernement…
Goldman Sachs သည် 3MDB ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါးပေးဆောင်ရလိမ့်မည် - New York Times
3MDB အမှု၌ Goldman Sachs ကဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါးပေးဆောင်ရမည့် CasetranscriptBacktranscriptGoldman Sachs 1MDB အမှု၌ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါးဆပ်မည်...
30-year old Cameroonian Entrepreneur, Budi Norbert has been honoured asaDistinguished CEO byaNigerian Award Initiative, the Damsas Mega Business Limited Abuja. The extensive works of Budi Norbert,Founder & CEO at Next Digital…
Nganou Djoumessi သည်လမ်းစစ်ဆေးရေးမစ်ရှင်တွင်
Depuis le 20, et ce jusqu’au 23 octobre 2020, le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, se livre à un véritable périple dans le cadre d’une visite des chantiers de construction des routes dans les régions du…
ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက် Chip Cookies စာရွက် - New York Times
ဒီ cookies တွေကိုအမှန်တကယ်“ ပြီးပြည့်စုံတဲ့” ဖြစ်စေတဲ့အရာဟာအစွန်းရောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါကအသေးစိတ်အတွက်အာရုံစိုက်မှုတစ်ခုပဲ။ pastry စားဖိုမှူး Ravneet Gill ဟာသူမရဲ့စာရွက်ကိုတီထွင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူမညွှန်ကြားချက်အားလုံးဟာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်တည်ရှိနေတယ်။
FCFA ၁.၇ ဘီလီယံလှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်မှမည်သူအကျိုးခံစားရမည်နည်း။
၀ န်ကြီးချုပ်က ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အမိန့်သည် Coronavirus အားတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အထူးအမျိုးသားကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားမှုကိုပြfix္ဌာန်းခြင်းနှင့်ယင်း၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်မှုများကိုစာအိတ်ခွဲချထားသည်။
Church for Shift ရှိပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်တွင်တူညီသောလိင်မှုဆိုင်ရာသမဂ္ဂများကိုထောက်ခံမှုပေးသည်
Martin Ndtoungou Mpile; အဆိုပါအလယ်အလတ်ခြင်္သေ့၏နယူး ဦး ခေါင်းနည်းပြ
62-year old football tactician, Martin Ndtoungou Mpile is the new head coach of the Intermediate Lions appointed some three months to the 2020 CHAN to be hosted in four three cities of Cameroon The renowned football coach and a…
123 ... 171 လာမယ့်